नयाँ स्मार्टफोनमा देखिने ४ वटा क्यामेराको काम के हो ? - Samriddha Nuwakot News
जीवनशैली टप फिचर सूचना प्रविधि
२०७७ असार ३०, मंगलवार १३:४८ गते २०७७ श्रावण २, शुक्रबार १३:५१ गते Samriddha Nuwakot NewsLeaveaComment on नयाँ स्मार्टफोनमा देखिने ४ वटा क्यामेराको काम के हो ?
स्मार्टफोनको पछाडिपट्टी लेन्ससहित चार वटा क्यामेरा छन् भने यसलाई क्वाड क्यामेरा सेटअप भनिन्छ । क्वाड क्यामेरा सेटअपमा प्राइमरी लेन्स, टेलिफोटो लेन्स, अल्ट्रावाइड लेन्स र डेप्थ सेन्सर लेन्सहरु प्रयोग गरिएका हुन्छन् । यी सबैको संयोजनबाट उच्च गुणस्तरको फोटो तथा भिडियो खिच्न सहयोग पुग्दछ ।
यसरी गर्छ काम :
“उस्तै उस्तै छ”
२०७७ कार्तिक १७, सोमबार ०७:४४ गते Samriddha Nuwakot News
तुइन विस्थापन आश्वासनको मात्रै , तुइनबाट खसेर हेटौंडामा एक वृद्धको मृत्यु
२०७७ श्रावण ७, बुधबार ०८:५२ गते Samriddha Nuwakot News